Otu esi edozi "Njehie emeela nke mere ka nyocha ahụ kwụsị" na scanpst.exe - Data Iweghachite Blog
Home Iweghachite data Iweghachite faịlụ Iweghachite Email Iweghachite data Outlook Esi edozi "Njehie emeela nke mere ka nyocha ahụ kwụsị" na scanpst.exe
Esi edozi "Njehie emeela nke mere ka nyocha ahụ kwụsị" na scanpst.exe
Iweghachite data Outlook January 26, 2021
Ekekọrịta Ugbu a:
Anyị ga-enyocha ihe kpatara sọftụwia scanpst.exe nwere ike ịkwụsị idozi faịlụ igbe ozi rụrụ arụ na otu ị ga - esi dozie nsogbu a.
Ọ bụ ezie na Microsoft na-enye scanpst.exe dị ka ihe ngwọta maka idozi nsogbu nrụrụ Outlook, ọ naghị arụ ọrụ mgbe niile. Mgbe ụfọdụ, ngwa ahụ na-akwụsị ịrụ ọrụ mgbe mmezi faịlụ na-aga n'ihu ma nwee ike inye nzaghachi dịka "Njehie emeela nke mere ka nyocha ahụ kwụsị".
Kedu ihe na-eme ka software nrụzi igbe akwụkwọ ozi kwụsị ọrụ?
Enwere ọtụtụ ihe nwere ike imetụta arụmọrụ nke ngwa a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na faịlụ ndị dị mkpa dị mkpa maka ọrụ kwesịrị ekwesị nke ngwa ahụ na-efu ma ọ bụ mebie, ngwanrọ ahụ nwere ike ịkwụsị na-atụghị anya ya ma kpalite ozi njehie ahụ dị n'elu. Ọ bụrụ na faịlụ DLL nke na-akwado ngwaọrụ nrụzi a rụrụ arụ, ngwa ahụ agaghị arụ ọrụ. Enwere ike imebi nke faịlụ DLL site na njehie na ngwaike ma ọ bụ ngwanrọ kọmputa gị, ọdịda ike, na mwakpo malware.
Nkọwapụta nke usoro gị na-ekpebi etu esi arụ ọrụ kọmputa ngwa ngwa. Nke a gụnyere arụmọrụ nke ngwanrọ nrụzi Outlook a. Ọ bụrụ na sistemụ kọmputa gị enweghị ebe nchekwa zuru oke na ike nhazi, mgbe ahụ ngwa ahụ nwere ike ịkwụsị ịrụ ọrụ ọ kachasị ma ọ bụrụ na ị na-anwa imezi nnukwu faịlụ. Ọzọkwa, njehie na kọmputa gị ndekọ na sistemụ nwere ike belata gị usoro budata.
Ihe ọzọ nwere ike ime ka Nyocha ngwa imebi usoro mmezi bụ mgbe emelitere ngwanrọ ahụ. Nke a nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị na-eji ụdị ochie nke Outlook. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na ogo nrụrụ faịlụ nwere ike imetụta otú nrụzi si arụ ọrụ. Mgbe igbe ozi igbe ozi gị mebiri emebi, SCANPST nwere ike ịdaba mgbe ọ na-achọ ịrụzi ya.
Ihe ị ga - eme mgbe ị zutere njehie a
Ihe ị na - eme mgbe ngwaọrụ nrụzi ahụ na - adaba na - enweghị idozi data igbe ozi gị ga - adabere na isi ihe kpatara nsogbu ahụ. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịchọpụta iguzosi ike n'ezi ihe nke sistemụ gị iji chọpụta ihe ị ga-eme.
A ezigbo ebe start bụ iji chọpụta ma gị usoro nwere nhazi ike na-akwado na mgbake gị igbe akwụkwọ ozi data. Ọ bụrụ na kọmputa gị adịla nwayọ mgbe ị na-arụ ngwa ndị ọzọ, ọ nwere ike ibute ngwanrọ ahụ. N'okwu a, mee nyocha sistemụ ma dozie nsogbu ndị nwere ike ịpụta dị ka mwakpo malware, ndekọ kọmputa rụrụ arụ na mmezi sistemụ arụmọrụ. Ka ị na-arụ ọrụ ndị a, gbaa mbọ hụ na data igbe ozi gị dị nchebe.
Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na kọmputa gị na-arụ ọrụ nke ọma, mgbe ahụ nsogbu nwere ike ịbụ ngwaọrụ nrụzi. Tụlee inweta ụdị emelitere nke ngwa ahụ site na ịwụnye ụdị MS Outlook ọhụrụ ma gbalịa nwetaghachi data igbe ozi gị. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ị ga-enwe ike iweghachite ozi ịntanetị gị.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na nsogbu ahụ dịgidere, mgbe ahụ data Outlook gị merụrụ ahụ. Nke a bụ ebe ọkachamara pụrụ iche na nrụzi dị ka DataNumen Outlook Repair bia odika. E jiri ya tụnyere ihe ngwọta ndị ọzọ na klaasị ya, ngwa ọrụ a pụtara dịka otu ngwa kachasị mma nwere ike igbochi nrụrụ data dị mgbagwoju anya na faịlụ Outlook. Cheta ịhazigharị mmezi faịlụ na mweghachi iji kwado mkpa gị. I nwere ike ime nke a na taabụ “Nhọrọ”.
Nke gara aga post
Ihe I Kwesịrị Ime Mgbe Outlook PST /OST Faịlụ dị nwayọ ma ọ bụ anaghị anabata ozi
Ihe ị ga - eme mgbe Outlook Repair Ngwá Ọrụ (scanpst.exe) Emezigharị faịlụ PST
Ihe ị ga - eme mgbe Outlook Repair Tool (scanpst.exe) Onweghi ike weghachite ihe ichoro
Esi edozi “Ọ bụghị ezigbo ibe edokwubara” Nsogbu na MS Access
Otu esi edozi “enweghị ike ịgbasa nchekwa” njehie na Outlook PST File
Categories Họrọ Atiya Ndabere data (103) Iweghachite data (3,881) Njikwa faili (3,810) Archive na Ndabere faịlụ Iweghachite (55) BKF Njikwa faili (7) CAB Archive Iweghachite (1) RAR Archive Iweghachite (4) TAR Archive Iweghachite (2) Zip Njikwa faili (39) Iweghachite data (354) DBF Iweghachite data (1) Oracle Iweghachite data (4) SQL Server Iweghachite data (349) Iweghachite Email (2,251) Exchange OST Njikwa faili (100) Iweghachite data Outlook (2,157) Ngwaọrụ Mmezi Igbe (4) Outlook Express Iweghachite Njikwa DBX (4) Outlook PST Paswọdu Iweghachite (1) Iweghachite onyonyo na ederede (40) AutoCAD DWG Njikwa faili (8) PDF Ihe ederede ederede (27) PSD Image Recovery (5) Iweghachite Office Office (1,058) Nweta data nchekwa data (342) Iweghachite faịlụ Excel (308) PowerPoint Njikwa faili (4) Okwu ederede ederede (401) Iweghachite faịlụ | Iweghachite data (13) Iweghachite Sistem (13) Iweghachite Sistem (7) Njikwa Undelete (1) Iweghachite ngwaike (2) Misc (2) Ngwọta (2,557) Archive, Mkpakọ & Ngwọta ndabere (3) Zip Ngwọta Archive (3) Ngwọta data (294) SQL Server Ngwọta (294) Ngwọta Ọfịs (2,260) Ngwọta Nweta (241) Ihe Ngwọta Excel (353) Ihe Ngwaọrụ Excel na Add-ins (28) Ngwọta Mgbanwe (71) Ngwọta Outlook (1,208) Ngwaọrụ & ihe nlebara anya na-efu (6) Okwu Ngwọta (387) Ngalaba (1)
Archives Họrọ net Nọvemba 2020 (10) Ọktọba 2020 (20) Septemba 2020 (50) Ọgọstụ 2020 (55) Julaị 2020 (55) June 2020 (27) Ike 2020 (3) Machị 2020 (19) June 2019 (3) Ike 2019 (5) Eprel 2019 (1) Machị 2019 (7) Febụwarị 2019 (9) Nọvemba 2018 (1) June 2018 (19) Ike 2018 (61) Eprel 2018 (62) Machị 2018 (100) Febụwarị 2018 (78) Jenụwarị 2018 (104) Disemba 2017 (104) Nọvemba 2017 (105) Ọktọba 2017 (93) Septemba 2017 (82) Ọgọstụ 2017 (90) Julaị 2017 (105) June 2017 (110) Ike 2017 (134) Eprel 2017 (122) Machị 2017 (154) Febụwarị 2017 (139) Jenụwarị 2017 (146) Disemba 2016 (195) Nọvemba 2016 (253) Ọktọba 2016 (159) Septemba 2016 (118) Ọgọstụ 2016 (138) Julaị 2016 (145) June 2016 (85) Ike 2016 (65) Eprel 2016 (11) Nọvemba 2015 (12) Ọktọba 2015 (27) Septemba 2015 (31) Ọgọstụ 2015 (17) Julaị 2015 (32) June 2015 (1) Ike 2015 (16) Machị 2015 (12) Jenụwarị 2015 (23) Disemba 2014 (25) Nọvemba 2014 (33) Ọktọba 2014 (9) Septemba 2014 (51) Ọgọstụ 2014 (67) Eprel 2014 (38) Machị 2014 (5) Febụwarị 2014 (16) Jenụwarị 2014 (19) Disemba 2013 (13) Nọvemba 2013 (21) Ọktọba 2013 (16) Septemba 2013 (34) Ọgọstụ 2013 (17) Julaị 2013 (20) Nọvemba 2010 (21) Ọktọba 2010 (41) Septemba 2010 (21) Ọgọstụ 2010 (21) Julaị 2010 (30)
Kacha ọhụrụ posts